nattalin: အရင်းမစိုက်ပဲ အမြတ်ထုတ်ခြင်း
ရာဘင်နိုဘစ်ခ်ျ နယူးယောက်ကို ရောက်လာတယ်။ စါးသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားပြီး ဆိုင်မန်နေဂျာကိုမေးတယ်။
" ဒီဆိုင်မှာ .. ဆာရာ ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။သူမကို ဘယ်မှာတွေ.နိုင်မလဲ ခင်ဗျာ။
မန်နေဂျာက ဘားကောင်တာ ဘေးမှာရပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကိုညွန်ပြလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးနားကို ရာဘင်နိုဘစ်ခ်ျ ကပ်လာပြီးပြောတယ်။
"ခင်ဗျားဟာ အင်မတန်လှတဲ့ မိန်းကလေးပါလား။ ကျွန်တော်နဲ့ အတူလိုက်ခဲ့ပါလား။ ဒေါ်လာ နှစ်ရာပေးမယ်လေ။ဘယ့်နှယ့်လဲ။ "
ကောင်မလေး သဘောတူလိုက်တယ်။(ပုံမှန်ဈေး 50/100 $ ထက်မပို ဟုကြားဖူးသည်။)
နောက်တနေ. ရာဘင်နိုဘစ်ခ်ျ ထပ်ရောက်လာပြီး မနေ.ကအတိုင်း ကမ်းလှမ်းတယ်။ကောင်မလေးက သဘောတူပြန်တယ်။
တတိယနေ.တွင်လည်း ယခင်ရက်များကအတိုင်း ရာဘင်နိုဘစ်ခ်ျ ကမ်းလှမ်းပြန်တယ်။ ကောင်မလေး ဒီတခါလဲမငြင်း။
ဟိုတယ်ခန်းထဲတွင် ကောင်မလေးက သူ.ကိုမေးတယ်။ " အစ်ကိုကြီး ပိုက်ဆံသိပ်ပေါတယ်နော် ။ ဘယ်ကလာတာလဲဟင်။
" ဟယ် ..ဟုတ်လား။ ကျွန်မရဲ. ဒေါ်လေး အဲဒီမှာနေတာရှင့် "
" အေး... မင်းကို ဒေါ်လာ ခြောက်ရာပေး ပေးပါလို. သူကပဲငါ့ကို လူကြုံပါးလိုက်တာလေ။ "